MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Redeem and get up to 1,000 Point Promotion MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
ပျော်ရွှင်ကံထူး MPT Moneyနဲ့မြူး
Mobile ဆုလက်ဆောင်များကို လဲလှယ်ပြီး MPT Point ၁,၀၀၀ အထိရရှိနိုင်မည့် အစီအစဥ်
MPT Club အဖွဲ့ဝင်များ အတွက် MPT Point ၁,၀၀၀ အထိ ပြန်လည်ရရှိမည့် အစီအစဥ်လေးလာပါပြီ။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ MPT Club ၏ mobile ဆုလက်ဆောင်များကို MPT 4U application မှ အနည်းဆုံး ၅၀ points ဖြင့်လဲလှယ်ရုံနှင့် point များအပိုလက်ဆောင် အနေနှင့် ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပိုလက်ဆောင် point များကို ပရိုမိုးရှင်းကာလပြီးဆုံးပါက ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုပဲ MPT Club ရဲ့ mobile လက်ဆောင်များကိုလဲလှယ်ပြီး အပို point များရယူလိုက်ကြပါစို့။
Diamond level အတွက် ၁,၀၀၀ points
Platinum level အတွက် ၈၀၀ points
Member level အတွက် ၅၀၀ points
MPT Club အဖွဲ့ဝင်မဖြစ်‌သေးပါက အောက်ဖော်ပြပါ link လေးမှ MPT Club သို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ပါတယ်။
MPT Club သို့ စာရင်း ပေးသွင်းရန်
MPT Point များဖြင့် MPT 4U မှ mobile ဆုလက်ဆောင်များလဲလှယ်နည်း
ဆုလက်ဆောင်များလဲလှယ်ရန် MPT Point ကိုနှိပ်ပါ
ဆုလက်ဆောင်များ ရွေးရန် Catalogue ကိုနှိပ်ပါ
မိုဘိုင်းလက်ဆောင်လဲလှယ်ရန် MPT Services ကိုရွေးချယ်ပါ
နှစ်သက်ရာ မိုဘိုင်းလက်ဆောင်များကို ၅၀ points မှစ၍လဲလှယ်ပါ
1.MPT Club သို့ စာရင်းပေးသွင်းထားသော MPT အသုံးပြုသူများအားလုံး ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
2.MPT Club သို့ စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် MPT 4U application မှတစ်ဆင့် ကျား/မ၊ မွေးနေ့ တို့ကိုပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းစာရင်းပေးသွင်းထားသူဖြစ်ရပါမည်။ (ဥပမာပြထားသော “01.01.1900” မွေးနေ့အချက်အလက်အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းမပြုရ)
3.ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၀၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ထိဖြစ်သည်။
4.ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် MPT 4U application မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ mobile ဆုလက်ဆောင် တစ်ခုခု ကို အနည်းဆုံး (၁)ကြိမ် လဲလှယ်ထား ရှိရန်လိုအပ်သည်။
5.ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း mobile ဆုလက်ဆောင်များကိုလဲလှယ်ထားသူသည် အပိုလက်ဆောင် point များအား (၁) ကြိမ်သာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
6.အပိုလက်ဆောင် point များမှာ Member level အတွက် ၅၀၀ points၊ Platinum level အတွက် ၈၀၀ points နှင့် Diamond level အတွက် ၁,၀၀၀ points တို့ဖြစ်သည်။
7.လွန်ခဲ့သော ၃လ အတွင်း ပျမ်းမျှအသုံးပြုလိုက်သော မိုဘိုင်း ငွေပမာဏမှာ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်အောက်ဖြစ်ပါက Member level၊ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်မှ ၂၉,၉၉၉ ကျပ် ဖြစ်ပါက Platinum level နှင့် ၃၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် ဖြစ်ပါက Diamond level သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
8.အပိုလက်ဆောင် point များအား ပရိုမိုးရှင်းကာလပြီးဆုံးပါက (၁)ပတ်အတွင်း ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အပိုလက်ဆောင် point များ ရရှိကြောင်း SMS ဖြင့်အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
9.ဤပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို MPT မှ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မဆို ရုပ်သိမ်း (သို့) ပြောင်းလဲ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
1. Redeem and get up to 1,000 Point Promotion ဆိုသည် မှာ အဘယ်နည်း။
MPT Club member level အားလုံး မည်သည့် MPT Club GSM product ကို မဆို MPT Club ပွိုင့် ဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် လဲလည် ရုံ ဖြင့် bonus ပွိုင့် 1,000 အထိ ကို သတ်မှတ် အချိန်ကာလ တွင် လက်ခံရရှိမည့် အစီအစဉ် ဖြစ်သည်။
2. Redeem and get up to 1,000 Point Promotion မှ bonus ကို ရရှိရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင် ရမည်နည်း
၁) MPT Club ကို MPT4U မှအဖွဲ့ဝင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၂) မည်သည့် MPT Club GSM product ကို မဆို MPT Club ပွိုင့် ဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် လဲလှယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃) Member level အလိုက် များကို အောက် ပါအတိုင်း ရရှိနိုင်သည်။
Diamond – 1,000 points
Platinum – 800 points
Member – 500 points
3. MPT Club ကိုအဖွဲ့ဝင်ရန် အပို အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရမည်လား။ ဤ campaign ကိုပါဝင်ရန် အပို အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရမည်လား ။
MPT Club ကိုအဖွဲ့ဝင်ရန် အပို အခကြေးငွေ ပေးဆောင် ရန် မလိုအပ်ပါ။
မည်သည့် MPT Club GSM product(SMS,Voice,Data) ကို မဆို MPT Club ပွိုင့် ဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် လဲလည် ရန် သာ လိုအပ်ပါသည်။ Mobile wallet ထဲမှ အပို အခကြေးငွေ ပေးဆောင် ရန် မလိုအပ်ပါ။
4.Campaign သည် မည်သည့် အချိန်ကာလ အထိ ဖြစ်သနည်း။
June လ ၄ရက် နေ့ မှ ၃၀ရက် နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။
5.မိတ်ဖက်ဆိုင်များ၏ ပစ္စည်း များကို လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် bonus ပွိုင့် ကို ရရှိနိုင်မည်လား။
မိတ်ဖက်ဆိုင်များ၏ ပစ္စည်း များကို လဲလှယ်ခြင်း ကိုအကျုံးမဝင်ပါ။
6. MPT Club GSM product ကို တစ်ကြိမ် ထပ်ပို၍ လဲလှယ်ပါက bonus ပွိုင့် ကို မည်မျှရရှိမည်နည်း။
မည်သည့် အကြိမ်အရေ ရှိစေမှု bonus ပွိုင့် ကို Member level အလိုက် တစ်ကြိမ် အနေဖြင့်သာ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
7. bonus ပွိုင့် ကို မည်သည့် အချိန်တွင် ရရှိမည်နည်း။
Campaign ပြီးဆုံးသွားသည် အချိန် တွင် customer အားလုံးကို ၁ရက် ဂျူလိုင်မှ ၇ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၂၀ အတွင်း ထည့်သွင်းပေးသွား မည်ဖြစ်သည်။
8. bonus ပွိုင့်ကိုလက်ခံ ရရှိကြောင်း မည်သို့ သိရှိနိုင်သနည်း။
bonus ပွိုင့် ရရှိမှုကို စာတို လက်ခံရရှိပြီး သိရှိနိုင်ပါသည်။
9. ရရှိလာသော Points များကို မည်သို့ အသုံး ပြုနိုင်သနည်း။
10. ရရှိလာသော bonus Points တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး ရက်များရှိပါသလား။
ရရှိ သော နေ့ မှ ပုံမှန်သက်တမ်းအတိုင်း ၃၆၅ ရက် ဖြစ်သည်။
11. MPT Club GSM Product များကို လဲလှယ် ခြင်း မှ bonus point ဘယ် လောက်ရရှိမည်နည်;။
Member level အလိုက် Points များကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Member level အလိုက် များကို အောက် ပါအတိုင်း ရရှိနိုင်သည်။
12.bonus point တွက်ချက်မှု ကို member level အပေါ် မည်သို့ သတ်မှတ်ထားသနည်း။
ထပ်ဆောင်း အပို bonus Points အတွက် သင် လဲလှယ် လိုက်သော နေ့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် member level အတိုင်း ပွိုင့် တွက်ချက် သွားမည် ဖြစ် သည် (ဥပမာ သင်ဟာ MPT Club GSM Product လဲလှယ် လိုက်သော နေ့တွင် platinum level ဖစ်နေပါက Bonus point ကို Platinum level အပေါ်တွင် သာ တွက်ချက်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရရှိသော နေ့တွင် ပွိုင့် ၈၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
13.SMS သို့ USSD မှ MPT Club GSM product လဲလှယ်ခြင်းသည် bonus points ရရှိမှု အကျုံးဝင်ပါသလား။
အကျုံးမဝင်ပါ။ MPT4U Application တစ်ခုထဲကပဲ လုပ်ဆောင်ပြီး bonus points များ ရနိင်မည် ဖြစ်သည်။
14. MPT4U application link ကို သိရှိလိုပါသည်။
MPT4U Application ကို အောက်ပါ link မှ download ရရှိနိင်ပါသည်။ (https://itunes.apple.com/zw/app/mpt-4-u/id1117941776?mt=8 for IOS version / bit.ly/FREE_MPT4UApp for Android version)